Ubugcisa obuphefumlelweyo bokutya beLego ngumculi waseJapan | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ubugcisa beLego ngumculi waseJapan
I-Lego ibethelelwe kakuhle kwinkcubeko yethu ngokubanzi kwaye ukongeza ekubeni yinxalenye yobuntwana bezigidi zabantu nakwizizukulwana ezizayo, ikwanjalo isebenza njengendlela yokubonisa ukuba umntu unetalente yokuyisebenzisa njengendlela yokubonisa.
Un Umdali waseJapan usebenzisa iziqwenga zeLego ukubonisa into enokwenziwa ngezi zinto zidaliweyo ziphefumlelwe ziindidi zokutya ezinje ngeebhanana okanye ihamburger engaqhelekanga. Asiyi kumangaliswa yile ngcamango, kuba ukusuka kule mizila sihlala sizisa zonke iintlobo zamagcisa aneemfuno ezahlukeneyo.
UTary ngumdali wezi zinto uqikelelo lobugcisa kunye neLego Kwaye uhlala eyila ezinye ngoonobumba be-Star Wars, kodwa yile inokondla ngakumbi apho kubonakala ngathi ukhululekile ukusibonisa uthotho lwamaqhekeza.
Ehlabathini lonke kukho Abadali abangama-40 beLego Master kwaye nganye yazo ikhethwe ngononophelo yinkampani. Ngokufanayo neminye imisebenzi yezobugcisa, baqala njengabafundi ukuba bafundise ukufundisa kotitshala kunye nabo bafunda iindlela ezahlukeneyo, into edla ngokuthatha iminyaka embalwa ngaphambi kokuba bazithathele loo nqanaba.
Enye yeenkosi zokuyila, uPaul Chrzan, ugcina ukuba uhlala exelela wonke umntu ukuba sukuyeka ukwakha nokudala. Kuya kufuneka uqhubeke uyila kwaye udlale ngamaqhekeza kwaye ungangeni kwinkqubo yesiqhelo yesiqhelo edala indlu kunye nesiphekepheke. Yiyo enye ecebisa ukuzama ukwenza isilwanyana sasekhaya, umzobo wabazali okanye into eyahlukileyo kuleyo ihlala yakhiwe ngolu hlobo lwamaqhekeza eLego.
Unayo Iiflickr Umdali waseJapan ukuba aqhubeke nomsebenzi wakhe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ubugcisa beLego ngumculi waseJapan
Sihlalutye usiba lwe-Bamboo Stylus Duo